तँ परमेश्‍वरको इच्छाप्रति जति धेरै सचेत हुन्छस्, तैँले त्यति नै बढी बोझ बोक्नेछस् अनि तैँले बोक्ने बोझ जति ठूलो हुन्छ, तेरो अनुभव त्यति नै बढी समृद्ध हुनेछ। जब तँ परमेश्‍वरको इच्छाप्रति सचेत हुन्छस्, परमेश्‍वरले तँमाथि एउटा बोझ राखिदिनुहुनेछ, तब उहाँले तँलाई सुम्पिनुभएका बोझहरूको सम्बन्धमा उहाँले तँलाई अन्तर्दृष्टि दिनुहुनेछ। परमेश्‍वरले तँलाई यो बोझ दिनुहुँदा उहाँको वचनबाट खाँदै र पिउँदै तैँले सबै सम्बन्धित सत्यताहरूलाई ध्यान दिनेछस्। यदि तँसित तेरा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूको जीवनसम्बन्धी बोझ छ भने, यो परमेश्‍वरले तँलाई सुम्पिनुभएको बोझ हो अनि तैँले सधैँ आफ्ना दैनिक प्रार्थनाहरूमा यो बोझ उठाउनेछस्। परमेश्‍वरले जे गर्नुहुन्छ, त्यो तँमाथि लादिएको छ अनि परमेश्‍वरले जे गर्न चाहनुहुन्छ, तँ त्यो गर्न इच्छुक हुन्छस्; परमेश्‍वरको बोझलाई आफ्नो बोझको रूपमा लिनु भनेको यही नै हो। यस अवस्थामा, परमेश्‍वरको वचनबाट तैँले खाँदा र पिउँदा, तैँले यस्तै प्रकारका विषयहरूमा ध्यान दिनेछस्, अनि तैँले सोच्‍नेछस्, म कसरी यी समस्याहरूलाई समाधान गर्नेछु? मेरा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूले छुटकारा हासिल गर्न तथा आत्मिक आनन्द पाउन कसरी म तिनीहरूलाई सक्षम तुल्याउन सक्छु? सङ्गति गर्दै गर्दा तैँले यी समस्याहरू समाधान गर्ने कुरामाथि पनि ध्यान दिनेछस् अनि परमेश्‍वरको वचनबाट खाँदै र पिउँदै गर्दा तैँले यी विषयहरूसँग सम्बन्धित वचनहरू खाने र पिउने कुरामाथि ध्यान दिनेछस्। उहाँका वचनहरूबाट खाँदै र पिउँदै गर्दा तैँले एउटा बोझ पनि बोक्नेछस्। परमेश्‍वरका मागहरूबारे तैँले बुझिसकेपछि, कुन मार्ग लिनुपर्ने हो त्यसबारे तँलाई अझ स्पष्ट हुनेछ। तेरो बोझले ल्याएको पवित्र आत्माको अन्तर्दृष्टि र प्रकाश यही हो अनि यो तँलाई प्रदान गरिएको परमेश्‍वरको निर्देशन पनि हो। किन म यसो भन्छु? यदि तँसित कुनै बोझ छैन भने, परमेश्‍वरका वचनहरू खाँदा र पिउँदा तैँले ध्यान दिनेछैनस्; बोझ बोक्दै गर्दा जब तैँले परमेश्‍वरका वचनहरू खान्छस् र पिउँछस्, तब तैँले त्यसको सारलाई राम्ररी बुझ्न सक्छस्, तेरो मार्ग भेट्टाउन सक्छस् अनि परमेश्‍वरको मार्गलाई ध्यान दिन सक्छस्। त्यसैकारण, तेरा प्रार्थनाहरूमा, परमेश्‍वरले तँमाथि अझै बोझहरू राखिदिनुभएको अनि तँलाई अझै ठूलठूला कामहरू सुम्पिनुभएको होस् भनेर तैँले चाहना गर्नुपर्छ, ताकि तेरो अगाडि अभ्यास गर्नका निम्ति तँसित धेरै मार्ग होस्; ताकि परमेश्‍वरका वचनहरू खाँदा र पिउँदा त्यसले तँमा अझ ठूलो प्रभाव पार्न सकोस्; ताकि उहाँका वचनहरूको सारलाई राम्ररी बुझ्न सक्षम भएर तँ बढ्न सक्; ताकि पवित्र आत्माद्वारा प्रभावित भएर तँ अझै बढी सक्षम हुन सक्।
यदि तँ परमेश्‍वरद्वारा सिद्ध हुने अवसरहरू खोज्दैनस् अनि यदि सिद्धताको तेरो खोजीमा अरूभन्दा बढी सफल हुनको निम्ति तैँले संघर्ष गर्दैनस् भने, अन्ततः तँ अफसोसले भरिनेछस्। सिद्धता हासिल गर्ने सर्वोत्तम अवसर अहिले नै हो। अत्यन्तै राम्रो समय अहिले नै हो। यदि परमेश्‍वरद्वारा सिद्ध तुल्याइनको लागि तैँले गम्भीरतापूर्वक खोजी गर्दैनस् भने, उहाँको काम पूरा भएपछि धेरै ढिलो भइसकेको हुनेछ—तैँले अवसर गुमाइसकेको हुनेछस्। तेरा आकांक्षाहरू जतिसुकै ठूलो भए तापनि, यदि परमेश्‍वरले उप्रान्त काम गरिरहनुभएको छैन भने, तैँले जतिसुकै प्रयास गरे पनि कहिल्यै सिद्धता हासिल गर्न सक्नेछैनस्। तैँले यो अवसरको फाइदा उठाउनैपर्छ अनि पवित्र आत्माले आफ्नो महान् काम गर्नुहुँदा उहाँसित सहकार्य गर्नैपर्छ। यदि तैँले यो अवसर गुमाइस् भने, तैँले जतिसुकै प्रयासहरू गरे तापनि तँलाई कहिल्यै अर्को अवसर दिइनेछैन। तिमीहरूमध्ये कतिपय यसो भन्दै चिच्याउँछौ, “परमेश्‍वर, म तपाईंको बोझलाई ध्यान दिन इच्छुक छु, म तपाईंको इच्छालाई सन्तुष्ट तुल्याउन इच्छुक छु।” तैपनि, अभ्यास गर्नको निम्ति तँसित कुनै मार्ग छैन, त्यसैले तेरा बोझहरू टिक्नेछैनन्। यदि तेरो अगाडि मार्ग छ भने, तैँले एक पल्टमा एउटा अनुभव हासिल गर्नेछस् अनि तेरो अनुभव संरचित र व्यवस्थित हुनेछ। एउटा बोझ पूरा भइसकेपछि, तँलाई अर्को दिइनेछ। तेरो जीवनको अनुभव गहिरो हुँदै जाँदा, तेरा बोझहरू पनि अझ गहन हुनेछन्। कोही-कोही मानिसहरू केवल पवित्र आत्माले आफूलाई स्पर्श गर्नुभएको बेला मात्रै बोझ बोक्छन्; केही समयपछि अभ्यास गर्न तिनीहरूसित मार्ग नहुँदा, तिनीहरूले कुनै पनि बोझहरू बोक्न छोड्छन्। केवल परमेश्‍वरका वचनहरू खाएर अनि पिएर मात्रै तैँले आफ्ना बोझहरूलाई विकसित गर्न सक्दैनस्। धेरै सत्यताहरू बुझेर तैँले समझ प्राप्त गर्नेछस्, सत्यतालाई प्रयोग गरेर समस्याहरू समाधान गर्न सिक्नेछस् अनि परमेश्‍वरका वचनहरू तथा परमेश्‍वरको इच्छाबारे अझ सटीक बुझाइ हासिल गर्नेछस्। यी कुराहरूद्वारा, तैँले बोक्नका निम्ति बोझहरू विकास गर्नेछस् अनि तब मात्रै तैँले उचित प्रकारले काम गर्न सक्नेछस्। यदि तँसित बोझ छ तर सत्यताको स्पष्ट बुझाइ छैन भने, त्यसले पनि काम गर्नेछैन; तैँले व्यक्तिगत रूपले परमेश्‍वरका वचनहरू अनुभव गर्नुपर्छ र त्यसलाई कसरी अभ्यास गर्ने हो सो जान्नुपर्छ। तँ आफै वास्तविकताभित्र प्रवेश गरिसकेपछि मात्रै तैँले अरूको निम्ति जुटाउन, अरूलाई डोऱ्याउन सक्‍नेछस् र तँ परमेश्‍वरद्वारा सिद्ध तुल्याइन सक्नेछस्।
“मार्ग … (४)” मा यो लेखिएको छ, तिमीहरू युगौं-युगअघि नै परमेश्‍वरद्वारा पूर्वनियुक्त गरिएका राज्यका मानिसहरू हौ र तिमीहरूलाई कसैले पनि खोसेर लैजान सक्दैन। त्यहाँ यो पनि उल्‍लेखित छ, सबै जना परमेश्‍वरद्वारा प्रयोग गरिएका तथा सिद्ध तुल्याइएका होऊन् भन्ने परमेश्‍वर इच्छा गर्नुहुन्छ अनि उहाँले तिनीहरू परमेश्‍वरका मानिसहरूको रूपमा खडा होऊन् भन्ने माग गर्नुहुन्छ अनि परमेश्‍वरका मानिसहरू भएर मात्रै तिनीहरूले परमेश्‍वरको इच्छा पूरा गर्न सक्छन्। त्यो बेला, तिमीहरू सबैले यस विषयमा सङ्गति गरेका थियौ, परमेश्‍वरका मानिसहरूका स्तरहरूमा आधारित प्रवेशको मार्गबारे बातचित गरेका थियौ। त्यसैकारण, त्यस समय अवधिमा पवित्र आत्माले गर्नुभएको काम तिनीहरूलाई तिनीहरूको नकारात्मक अवस्थाबाट बाहिर ल्याउन र सकारात्मक अवस्थामा डोऱ्याउनको लागि थियो। त्यो बेला, पवित्र आत्माको काम प्रत्येकलाई परमेश्‍वरका मानिसहरूको रूपमा परमेश्‍वरका वचनहरूमा आनन्द लिन सक्षम तुल्याउने अनि तिमीहरूमध्ये प्रत्येकलाई परमेश्‍वरका मानिसहरू हौ र शैतानले तिमीहरूलाई खोसेर लान सक्दैन भनी स्पष्ट प्रकारले बुझ्ने तुल्याउनेतर्फ उन्मुख थियो। त्यसैले, तिमीहरू सबैले यसो भनेर प्रार्थना गऱ्यौ, “परमेश्‍वर! म तपाईंका मानिसहरूमध्ये एक हुन इच्छुक छु, किनभने युगौँ-युग पहिले नै तपाईंद्वारा पूर्वनियुक्त गरिएका थियौँ, किनभने तपाईंले नै यो हैसियत हामीलाई प्रदान गर्नुभयो। हामी यो हैसियतद्वारा तपाईंलाई सन्तुष्ट पार्न इच्‍छुक छौं।” तैँले यस प्रकारले प्रार्थना गर्दा, पवित्र आत्माले तँलाई छुनुहुन्थ्यो; यही प्रकारले काम गर्ने पवित्र आत्माको प्रवृत्ति थियो। यस समय अवधिमा, तैँले परमेश्‍वरको सामु आफ्नो हृदयलाई शान्त तुल्याउन प्रार्थना गर्नुपर्छ अनि आफैलाई तालीम दिनुपर्छ, ताकि तैँले जीवनको निम्ति संघर्ष गर्न सक् र राज्यको तालिममा प्रवेश गर्ने प्रयास गर्न सक्। पहिलो कदम यही नै हो। यस क्षणमा, परमेश्‍वरको काम भनेको प्रत्येकलाई ठीक बाटोमा प्रवेश गर्न लगाउनु, सामान्य आत्मिक जीवन तथा साँचो अनुभवहरू प्राप्त गर्न लगाउनु, पवित्र आत्माद्वारा सञ्चालित हुन लगाउनु हो अनि—यी कुराहरूलाई जग बनाई परमेश्‍वरका आज्ञाहरूलाई स्वीकार गर्नु हो। राज्यको तालीमभित्र प्रवेश गर्नुको उद्देश्य तिमीहरूको प्रत्येक बोलीवचन, कार्य, चाल, विचार तथा धारणालाई परमेश्‍वरका वचनहरूभित्र प्रवेश गर्न लगाउनु हो; परमेश्‍वरद्वारा बारम्बार स्पर्श पाउन लगाउनु हो अनि त्यसद्वारा उहाँको निम्ति प्रेमको हृदय विकास गर्नु हो; अनि तँलाई परमेश्‍वरको इच्छाका धेरै बोझ सम्हाल्न लगाउनु हो, ताकि प्रत्येक व्यक्ति परमेश्‍वरद्वारा सिद्ध तुल्याइने मार्गमा हुन सकोस्, ताकि प्रत्येक व्यक्ति ठीक मार्गमा होस्। तँ परमेश्‍वरद्वारा सिद्ध तुल्याइने यस मार्गमा आएपछि, ठीक मार्गमा हुन्छस्। तेरा विचार तथा धारणाहरू, साथै तेरा गलत मनसायहरूलाई सच्याउन सकिएपछि अनि तँ देहप्रति ध्यान दिने व्यक्तिबाट परमेश्‍वरको इच्छाप्रति ध्यान दिने व्यक्तिमा परिवर्तन भएपछि अनि तँ गलत मनसायहरूको उदय हुँदा त्यसले ल्याउने विकर्षणहरूलाई रोक्न सक्षम भएर परमेश्‍वरको इच्छाअनुरूप चल्ने भएपछि—यदि तैँले यो रूपान्तरण हासिल गर्न सक्छस् भने, तँ जीवन अनुभवको ठीक मार्गमा छस्। तेरो प्रार्थनाका अभ्यासहरू ठीक मार्गमा भएपछि तेरा प्रार्थनाहरूमा तँ पवित्र आत्माद्वारा छोइनेछस्। जब-जब तैँले प्रार्थना गर्छस्, तँलाई पवित्र आत्माले छुनुहुनेछ; तैँले हरेक पल्ट प्रार्थना गर्दा, परमेश्‍वरसामु आफ्नो हृदयलाई शान्त तुल्याउन सक्नेछस्। तैँले हरेक पल्ट परमेश्‍वरका वचनहरूको अध्याय खाएपछि र पिएपछि, यदि तैँले उहाँले अहिले गरिरहनुभएको कामलाई बुझ्न सक्छस् अनि कसरी प्रार्थना गर्ने, कसरी सहकार्य गर्ने, कसरी प्रवेश हासिल गर्ने सो सिक्न सक्छस् भने, तब मात्रै परमेश्‍वरका वचनहरूको तेरो खुवाइ र पियाइले परिणामहरू उत्पन्न गर्नेछन्। जब, परमेश्‍वरका वचनहरूद्वारा तैँले प्रवेशको मार्ग भेट्टाउन सक्छस् अनि परमेश्‍वरको कामको वर्तमान गतिशीलता, साथै पवित्र आत्माको कामको दिशालाई ठम्याउन सक्छस्, तब तँ ठीक मार्गमा प्रवेश गरेको हुनेछस्। परमेश्‍वरका वचनहरू खाँदा र पिउँदा यदि तैँले मुख्य बुँदाहरूलाई बुझेको छैनस् अनि त्यसपछि अभ्यास गर्नका लागि बाटो भेट्टाउन अझै असक्षम छस् भने, यसले परमेश्‍वरका वचनहरू कसरी ठीक प्रकारले खाने र पिउने भन्ने तँलाई अझै थाहा छैन अनि तैँले त्यसो गर्ने विधि वा सिद्धान्त पत्ता लगाएको छैनस् भन्ने देखाउँछ। परमेश्‍वरले हाल गरिरहनुभएको कामलाई यदि तैँले राम्ररी बुझेको छैनस् भने, उहाँले तँलाई सुम्पिनुहुने कामहरू तैँले स्वीकार गर्न सक्‍नेछैनस्। परमेश्‍वरले हाल गर्नुहुने काम मानिसहरू प्रवेश गर्नैपर्ने र तिनीहरूले अहिले नै बुझ्नुपर्ने काम हो। के तिमीहरूले यी कुराहरूलाई राम्ररी बुझेका छौ?
परमेश्‍वरद्वारा सिद्ध तुल्याइने कुराको खोजी गर्न व्यक्तिले पहिले उहाँद्वारा सिद्ध तुल्याइनुको अर्थ के हो, साथै सिद्ध तुल्याइनका निम्ति कस्ता शर्तहरू पालना गर्नुपर्छ भनी बुझ्नुपर्छ। व्यक्तिले त्यस्ता विषयहरूलाई राम्ररी बुझ्दा अभ्यासको बाटो खोजी गर्नुपर्छ। सिद्ध तुल्याइनका निम्ति, व्यक्ति एउटा निश्चित गुणस्तरको हुनुपर्छ। धेरै मानिसहरूमा जन्मजातै उच्च गुणस्तर पर्याप्त हुँदैन, यस्तो अवस्थामा तैँले मूल्य चुकाउनुपर्छ र व्यक्तिपरक ढङ्गले कडा परिश्रम गर्नुपर्छ। जति तेरो गुणस्तर खराब हुन्छ, त्यति नै बढी तैँले व्यक्तिपरक ढङ्गले प्रयत्न गर्नुपर्छ। परमेश्‍वरको वचनको तेरो बुझाइ जति बढी हुन्छ र जति बढी तैँले त्यसलाई अभ्यास गर्छस्, त्यति नै चाँडै तैँले सिद्धताको बाटोमा आफ्नो पाइला राख्न सक्छस्। प्रार्थनाद्वारा तँलाई प्रार्थनाको क्षेत्रमा सिद्ध तुल्याइन सकिन्छ, परमेश्‍वरका वचनहरू खाएर अनि पिएर, तिनीहरूको सारलाई राम्ररी बुझेर, तिनीहरूको वास्तविकताअनुसार जिएर पनि तँलाई सिद्ध तुल्याइन सकिन्छ। परमेश्‍वरका वचनहरूलाई दैनिक रूपमा अनुभव गरेर तैँले आफूमा के कमी छ जान्नुपर्छ, अझ भन्ने हो भने, तैँले तेरा घातक दोषहरू तथा तेरा कमजोरीहरू के-के हुन् भनी चिन्नुपर्छ र परमेश्‍वरलाई प्रार्थना तथा बिन्ती गर्नुपर्छ। यसो गरेर, तँलाई क्रमिक रूपले सिद्ध तुल्याइनेछ। सिद्धतातर्फको बाटो यस्तो हुन्छ: प्रार्थना गर्नु; परमेश्‍वरका वचनहरूलाई खानु र पिउनु; परमेश्‍वरका वचनहरूको सारलाई राम्ररी बुझ्नु, परमेश्‍वरका वचनहरूको अनुभवमा प्रवेश गर्ने कुरा हासिल गर्नु, तँ आफैमा के कमी छ भनी जान्नु, परमेश्‍वरको कामप्रति समर्पित हुनु; परमेश्‍वरको बोझप्रति सचेत हुनु अनि परमेश्‍वरको निम्ति तेरो प्रेमद्वारा देहलाई परित्याग गर्नु; अनि तेरा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूप्रति निरन्तर सङ्गतिमा सामेल हुनु जसले तेरा अनुभवहरूलाई समृद्ध बनाउन सक्दछ। चाहे त्यो सामुदायिक जीवन होस् वा तेरो व्यक्तिगत जीवन, चाहे त्यो ठूलो भेला होस् वा सानो, तिनीहरू सबैले तँलाई अनुभव र तालिम प्राप्त गर्न मदत दिन सक्छन् ताकि तेरो हृदय परमेश्‍वरसामु शान्त हुन र उहाँमा फर्किन सकोस्। यो सबै सिद्ध तुल्याइने प्रक्रियाको भाग हो। अघि उल्लेख गरिएझैँ परमेश्‍वरका वचनहरू अनुभव गर्नु भनेको वास्तवमा तिनीहरूलाई चाख्न सक्षम हुनु र आफूलाई ती वचनहरूअनुसार जिउन दिनु हो ताकि तैँले परमेश्‍वरप्रति अझ ठूलो विश्‍वास र प्रेम हासिल गर्न सक्। यस प्रकारले, तैँले क्रमिक रूपमा आफ्नो भ्रष्ट, शैतानी स्वभावलाई त्याग्नेछस्; अनुचित अभिप्रायहरूदेखि आफैलाई स्वतन्त्र तुल्याउनेछस्; अनि सामान्य व्यक्तिको स्वरूपमा जिउनेछस्। परमेश्‍वरको निम्ति तँभित्र जति ठूलो प्रेम हुन्छ—भनाइको अर्थ, तेरो जति बढी भाग परमेश्‍वरद्वारा सिद्ध तुल्याइएको हुन्छ—त्यति नै कम तँ शैतानी भ्रष्टताको काबूमा हुनेछस्। तेरा व्यवहारिक अनुभवहरूद्वारा तैँले क्रमिक रूपमा सिद्धताको बाटोमा आफ्नो पाइला राख्नेछस्। यसरी, यदि तँ सिद्ध तुल्याइने चाहना गर्छस् भने, तैँले परमेश्‍वरको इच्छाप्रति सचेत हुनु र उहाँका वचनहरू अनुभव गर्नु विशेष रूपले महत्वपूर्ण छन्।
अघिल्लो: परमेश्‍वरको अघि आफ्नो हृदयलाई शान्त राख्ने सम्‍बन्धमा